Qiimaha | Buddha Trends Brand - Buddhatrends
-Waxbarasho ku saabsan heer sare-
Our brand waxaa lagu dhisay aasaaska adag ee fiicnaanta, jilicsan, iyo raaxo. Waxaan ka qoomameyneynaa bixinta fursado xiiso leh dharka aan nadiifka ahayn macaamiisha kala duwan ee habka ay ugu jaahwareeraan, quruxda, iyo raaxada ay si fiican u ilaaliyaan.
- Qanacsanaanta macaamiisha iyo farxad-
Waxaan leenahay dhaqan caan ah oo ku saabsan hormarinta, si joogta ah u hagaajinta iyo u bixinta sheyada xikmadda leh si aan ugu qancino macaamiisheena qadarin leh mar walba. Waxaan si qoto dheer u aaminsanahay in macaamiisha faraxsan ay sameeyaan calaamad farxad leh. Sidaa daraadeed, waxaa naloogu jiheeyay inaanu noqono calaamad muujinaysa marka dadku ay ka fekeraan qanacsanaanta iyo farxadda.
Waxaan leenahay ballanqaad aan ku habbooneyn anshaxa, daacadnimada iyo tayo sare leh. Waxaan daneyneynaa baahida macaamiisheena iyo ujeedada ka dambeysa danahooda soo iibsiga. Sidaa daraadeed, siyaasadkeenna dib u celinta waxaa lagu heli karaa marar dhif ah oo niyad-jebis ah si loo damaanad qaado waayo-aragnimo ganacsi oo heer caalami ah.
Waxaan u dabaaldegnaa kala duwanaanshaheena dhaqanka, shakhsiyadda, iyo danaha ugu dambeeya ee door weyn ka cayaaraya qaabkayaga. Sidaa awgeed, ururintayadu waxay ka kooban yihiin waxyaabo dhar ah 500 iyo boqolaal kabo gacmeed oo laga sameeyay adduunka oo dhan, oo ay ka mid yihiin Yurub, Afrika, iyo Aasiya si ay u qaataan isbeddel ballaadhan, aragti, dhaqan,.
Riix halkan si aad u akhrido aragtida iyo hawlaha budhadhka ama booqo annaga Bogga to create the look that fits your personality!